Alshabaab oo sheegtay Masuuliyadda dilka xildhibaan ka tirsanaa Baarlamaanka Hirshabelle | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Alshabaab oo sheegtay Masuuliyadda dilka xildhibaan ka tirsanaa Baarlamaanka Hirshabelle
Ururka Al-shabaab ayaa sheegtay inay dileen Xaaji Maxamed Maxamuud Siyaad oo ka tirsanaa baarlamaanka Hirshabelle kadib markii ay koox hubeysan ay saaka kala degeen gaari uu la socday oo ku sii jeeday magaalada Muqdisho.
Warbaahinta taageerta Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerar gaadmo ah ay dagaalamayaal ka tirsan Al-shabaab saaka ku qaadeen gaari marayay meel u dhexeysa magaaloyinka Jowhar iyo Balcad ayna kala degeen gaari uu saarnaa xildhibaan Maxamed Maxamuud Siyaad.
Gaariga lagala degey xildhibaanka ayaa ka tegey saaka magaalada Jowhar isagoo ku sii jeeday magaalada Muqdisho,waxayna dableyda wadada u gashay gaariga ay fasaxeen dhammaan dadkii kale ee saarnaa gaarigaas oo noociisu ahaa Noah.
Wadada u dhexeysa magaalooyinka Jowhar iyo Balcad ayaa hore weeraro ay uga geysanayeen labadii sano ee la soo dhaafay dagaalamayaasha Al-shabaab iyagoo weeraradaas ay ku dhinteen xildhibaano, mas’uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Sh/dhexe,ciidamo AMISOM ah iyo ciidamo ka tirsan milatariga Soomaaliya.
Alshabaab oo sheegtay Masuuliyadda dilka xildhibaan ka tirsanaa Baarlamaanka Hirshabelle was last modified: July 5th, 2020 by Admin
Xildhibaan ka tirsan HirShabelle oo lagu dilay wadada Muqdisho iyo Jowhar
Dhageyso:-Warka Galab ee Radio Warsan.
WHO oo baaq kasoo saartay dib u furista duulimaadyada Afrika